Yakuza and the Family (2021) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Go Ayano, Hayato Ichihara, Hayato Isomura, Hiroshi Tachi, Kosuke Toyohara, Machiko Ono, Shinobu Terajima, Shun Sugata, Suon Kan, Yukiya Kitamura
ဂပြနျဇာတျကားကောငျးနှဈသကျသူတှအေတှကျ imdb 6.9 ရထားတဲ့ဇာတျကားကောငျးလေးတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ။ ဂပြနျမှာနာမညျကွီးတဲ့ယာကူဇာတို့ အသိုငျးအ၀ိုငျးအကွောငျးကိုရိုကျကူးထာဖွဈပါတယျ. ဇာတျလမျးအကဉျြးအနနေဲ့ကတော့ Kenji Yamamoto ဟာသူ့အဖမေူးယဈဆေးနဲ့ သဆေုံးပီးနောကျပိုငျး စိတျကရြောဂါခံစားလာရပီး လူဆိုးဂိုဏျးထဲဝငျဖို့ဖွဈလာပါတယျ။Hiroshi Shibasaki ဆိုတဲ့ လူဆိုးခေါငျးဆောငျနဲ့ဆုံမိပီး Kenji တဈယောကျအဖပွေနျရလောကျသလို ခံစားခကျြတှဖွေဈလာခဲ့ပီး ဒီဂိုဏျးဟာ မိသားစုတဈခုဖွဈလာခဲ့အခါမှာတော့ ဆကျလကျကွညျ့ရူ့ပေးကပြါ။
ဒီဇာတျကးကိုဘာသာပွနျပေးသူကတော့ Myat Eaindray Khaing ဖွဈပါတယျ
ဂျပန်ဇာတ်ကားကောင်းနှစ်သက်သူတွေအတွက် imdb 6.9 ရထားတဲ့ဇာတ်ကားကောင်းလေးတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဂျပန်မှာနာမည်ကြီးတဲ့ယာကူဇာတို့ အသိုင်းအ၀ိုင်းအကြောင်းကိုရိုက်ကူးထာဖြစ်ပါတယ်. ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းအနေနဲ့ကတော့ Kenji Yamamoto ဟာသူ့အဖေမူးယစ်ဆေးနဲ့ သေဆုံးပီးနောက်ပိုင်း စိတ်ကျရောဂါခံစားလာရပီး လူဆိုးဂိုဏ်းထဲဝင်ဖို့ဖြစ်လာပါတယ်။Hiroshi Shibasaki ဆိုတဲ့ လူဆိုးခေါင်းဆောင်နဲ့ဆုံမိပီး Kenji တစ်ယောက်အဖေပြန်ရလောက်သလို ခံစားချက်တွေဖြစ်လာခဲ့ပီး ဒီဂိုဏ်းဟာ မိသားစုတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့အခါမှာတော့ ဆက်လက်ကြည့်ရူ့ပေးကျပါ။
ဒီဇာတ်ကးကိုဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ Myat Eaindray Khaing ဖြစ်ပါတယ်
Go Ayano Hayato Ichihara Hayato Isomura Hiroshi Tachi Kosuke Toyohara Machiko Ono Shinobu Terajima Shun Sugata Suon Kan Yukiya Kitamura
Go Ayano Hayato Ichihara Hayato Isomura Hiroshi Tachi Kosuke Toyohara Machiko Ono Ryō Iwamatsu Shinobu Terajima Shun Sugata Suon Kan Tarô Suruga Yukiya Kitamura
Option 1 onedrive.live.com 632 MB SD (480p)